Marka ay timaado SEO waa maxay hadafka ugu weyn ee shirkad dijital ah?
Sanadka 2017, SEO waa in ay noqoto mudnaanta koowaad ee istaraatiijiyada suuq-geynta guuleysta. Iyadoo aan lahayn istaraatijiyad SEO ah oo si fiican loo hirgeliyey, waxaa jira fursad yar oo kooxdaada suuqgeynta ay soo saari doonto natiijooyinka ganacsigaaga.
Haddii aad tahay mid ka mid ah milkiilayaasha bogagga kuwaas oo wali shaki ka haysta waxtarka SEO, markaa waxaad sii fiican u aqrineysaa akhriska. Maqaalkani waa isku day kale oo lagu qancinayo ganacsatada in ay tixgeliyaan SEO marka ay kobcinayaan ganacsigooda.
Maxay SEO ugu baahan tahay inay noqoto midda ugu muhiimsan ee Istaraatiijiyada Suuq-geynta Dijital ah? Haddii aad rabto inaad soo jiidato macaamiil badan, markaa waxaad u baahan tahay inaad hubiso in shirkaddaada dijital ah si sahlan loo heli karo internetka.
- vetro satinato bianco prezzo italian. Taasi waa marka SEO yimaado. Raadinta mashiinka raadinta waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee u oggolaanaya boggagaaga ama blogka in si dhaqso ah looga helo internetka. Waxay u shaqeysaa sida soo socota: haddii istaraatiijiyadaada suuqgeyntu aanay ku jirin wax-qabadka raadinta weydiimaha raadinta ee macaamiisha suuragal ah, waxaa suurtogal ah in shirkaddaada dijital ah aysan soo bandhigin natiijooyinka raadinta ugu sareysa ee ay helayaan. Natiijo ahaan, waxaad ka heleysaa taraafikada yar ee boggaaga taasoo keenaysa is-beddel yar.
Sida ku xusan tirakoobka, baaritaanka bani'aadamku wuxuu si fiican ugu soo noqdaa maalgashiga (ama ROI) marka loo eego raadinta lacagta. Sidaa darteed, haddii aad lacag badan ku bixiso lacagtaada raadinta lacag-bixinta, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dib uga fakarto habkaas.
SEO ayaa ku haboon labadaba: Shirkadaha B2B iyo B2C
Waxaa la xaqiijiyey marar badan in SEO ay tahay xulasho habboon labada shirkadood ee B2B iyo B2C. Xasuusnow, ha ahaato nooc kasta oo macmiil ah, waxay dhammaantood u muuqdaan inay sameeyaan baaritaano internetka ah ka hor inta aan la iibsan doorashada ugu dambeysa ee iibka. Sida laga soo xigtay cilmi-baarista 2014-ka ee Acquity Group, tirada badan ee iibsadaha B2B, oo ah 94%, samee qaar ka mid ah raadinta internetka kahor intaadan iibsan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in ku dhawaad ​​80% kuwa iibsadayaashu ay isticmaalaan Google raadinta si ay u helaan macluumaadka loo baahan yahay ee shabakadda.
Maalmahan, sababta ugu weyn ee shirkadaha B2B ee aan ku jirin istaraatiijiyada SEO waxay sabab u tahay khabiiro SEO ah oo ku saabsan kooxahooda suuq geynta. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan waxay muhiim u tahay shirkadaha B2B si ay ugu maalgashadaan inay keenaan xubnaha kooxda SEO-gaar ah. Tani waa sida kaliya ee ay u abuuri karaan istaraatijiyad guulaystay oo gaari doona taraafikada iyo kordhinta sicirka bedelaadda.
Istaraatiijiyada ugu fiican ee la wadaagayo SEO
Maanta, waa lagama maarmaan in lala socdo isbeddellada SEO. Iyadoo lagu maalgelinayo istaraatijiyad SEO ah oo loogu talagalay shirkaddaada digital, waxaad ku darsataa kalsoonida iyo awooddaada astaantaada. Waxa intaa ka badan, istaraatijiyad SEO ah oo aad u fiican ayaa kuu ogolaanaysa inaad hesho boggaaga shirkadda digital-ka ah bogagga hore ee raadinta.
Marka lagu daro SEO, ku bilaw inaad xubinimo u qalabeysid kooxdaada suuq geynta.
Waqtigaaga qaado oo raadso xirfadlaha xirfadlaha ah ee SEO iyo qoraallo qibrad u leh shirkaddaada dijital ah. Xusuusnow, marmarka qaarkood, waxay ku fiican tahay inaad shaqaaleyso xirfadlayaasha intii aad samayn lahayd wax walbo oo dhan. Waqtiga ama wakhti dambe, dadaalkaaga ayaa bixin doona.